16 Desambra 2020 - FJKM Québec - Canada
16 Desambra 2020
Miantso antsika hanatona Azy ny Mesia
MATIO 11 : 25-30
11:25 Tamin’izany andro izany dia namaly i Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin’ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin’ny zaza madinika.
11:26 Eny, Raiko; fa izany no sitraponao.
11:27 Ny zavatra rehetra natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala tsara ny Zanaka, afa-tsy ny Ray; ary tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy.
11:28 Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.
11:29 Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo ianareo.
11:30 Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako.
1-Mampanantena fitsaharana sy fialana sasatra Izy
Betsaka ny olona no mahatsiaro ho miasa fatratra noho ny adim-piainana .Anisan’izany ireo sahirana ara-pivelomana , tsy manana ny ampy , fa ny hohanina anio tadiavina anio , ny ampitso koa torak’izany . Ao ireo izay itambesaran’ny adidy sy ny andraikitra samy hafa , kanefa mahatsiaro ho kely hery sy tsy ampy fahalalana , ho enti-miatrika izany . Ao ireo taizan’aretina sy malemy ka lazoin’ny fahakivina sy ny famoizampo isanandro . Ao ireo nidonam-pahoriana noho ny fandaozana olo-tiana ka vesaran’ny aretimpo sy ny alahelo . Ao koa ireo miezaka fatratra sy maniry mba hiaina amin’ny fahamarinana araka ny maha-kristiana , kanefa mahatsiaro ho tsy mahita fahombiazana satria mahery vaika ny fahotana . Raha anisan’ireny ianao , dia aza mangataka andro intsony , fa miantefa aminao indrindra ny Tenin’i Jesoa manao hoe : « Mankanesa aty Amiko …fa Izaho hanome anareo fitsaharana » (and28)
2-Aza mihevi-tena ho hendry sy manan-tsaina
Misy tokoa ny olona izay tsy mba miasa fatratra sy tsy mahatsiaro ho mavesatra entana velively . Isan’izany ireo olona izay mihevi-tena ho manana ny ampy , tsy mijery afa-tsy ny fiainana an-tany , mpanamari-tena ka manao ny tenany ho hendry sy manam-pahalalana , matoky tena ka tsy mila an’i Jesoa hoe : « hendry sy manan-tsaina » (and25) . Nisy tamin’ireo Fariseo sy mpanora-dalàna no nihevi-tena ho toy izany . Tsy miankina amin’ny fahaizana sy fahakingan-tsaina ny fahazoana ny famonjena . Fa raha tsy izany dia ho voasakana ny bado sy ny tsy manam-pahalalana.
Aminao , inona no hevitry ny teny hoe : » fitsaharana »?